Sheekh Maxamed Aadan Iyo Sheekh Cabdi Xayi Oo Si Farshaxan Leh Uga Hadlay Halka Uu Ka Yimi Coronavires | Aftahan News
Sheekh Maxamed Aadan Iyo Sheekh Cabdi Xayi Oo Si Farshaxan Leh Uga Hadlay Halka Uu Ka Yimi Coronavires
“Hargabkii Dadka + Hargabkii Xoolaha Oo Isu-bedelay Corona………” Sh. Xayi
Hargeysa, (Aftahannews)-Sheekh Maxamed Aadan Muxumed oo ka mid ah culimada ugu caansan magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay inuu qur’aanka ka dhex helay xanuunka Coronavirus ee hadda faraha ba’an ku haya caalamka.
Sheekh Maxamed Aadan ayaa sheegay in xanuunkan uu yahay ama la mid yahay kii Nabi Muuse CS uu ku inkaaray ee kadibna lagu salladay Muuse Saamiri, kadib markii uu lumiyey qowmkiisa.
Saamiri waxa uu ka mid aha qoomkii Nabi Muuse CS, waana ninkii ku hogaamiyey reer Bani Isra’iil inay caabudaan Dibiga Ilaahay qayrkii, intii Nebi Muuse CS uu ku maqnaa Buurta Duur, isaga oo la soo hadlayey Allah SW. Ninkan magaciisa waxa la odhan jiray Muuse, waxaanu ka mid ahaa dadkii reer banu Isra’iil ee Eebe ka soo badbaadiyey dulmigii Fircoon.
Nabi Muuse oo inkaaraya Saamiri, wuxuu ku yidhi “tag, waxaa kuu sugnaaday nolosha inaad tidhaahdo taabasho ma jirto, waxaana kuu sugnaaday waqti aadan baajinayn (maalinta qayaame).” Saamiri waxa lagu ciqaabay in hadii uu qof jidhkiisa taabto inuu gubanayo ama maqaarka jidhkiisu soo daadanayo, sidaa awgeed haduu arko cid bani’aadam ah oo u soo dhowaata waxa uu odhanayey ha itaabanina, sidoo kale Eebe waxa uu u ballan qaaday mowcid aan baajismayn oo ah maalinta qayaame.
Sheekh Maxamed Aadan ayaa hadda sheegay in maadaama cudurka Coronavirus uu dadkii oo dhan ka dhigay kuwa kala cararaya oo leh “ ha I taaban” uu la mid yahay kii lagu salladay Muuse Saamiri.
Sidoo kale, Sheekh Cabdi Xayi oo ka mid ah culimadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladda Muqdisho ayaa qaab farshaxan leh u cabiray xannuunka caalamka khatarta ba’an ku hayaa, waxaannu yidhi“Hadda Coronavirusku halku ka yimi, waxa la yidhi Coronavirus wuxuu ka yimi waa wax jiri-jiray oo xoolaha ku ekeen jiray, waa hargab xoolaha ku dhaca, hargabka dadka ku dhacan waa hargab dadka ku ekaan jiray, mid waliba hargabkiisa ayuu ahaan jiray. Hadda dhibaatadda dhacay waxa weeye, hargabkii xoolaha ama xayaawaanaadka ayaa wuxuu u soo gudbay bani’aamka. Markaasa hargabkii xoolaha oo lagu daray hargabkii dadka wuxuu la mid noqday Coronavirus.